Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy Conidia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy Conidia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / mycology / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy Conidia
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ascospores sy ny conidia dia ny ascospore dia spore ara-nofo novokarin'ny ascomycetes nandritra ny fiterahana , ary ny conidia kosa dia spore asexual novokarina tao anaty conidiophores avy amin'ny holatra conidial nandritra ny fiterahana .
Ny spore dia singa iray amin'ny fiterahana na firaisana ara-nofo amin'ny biolojia. Izy io dia natao ho an'ny fanaparitahana sy ny fahavelomana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny toe-javatra tsy mahasoa. Raha ny mahazatra, ny spores dia ampahany amin'ny tsingerim-piainan'ny holatra, algoma ary protozoa maro. Ny holatra dia afaka mamokatra spora ara-nofo sy spore ara-nofo amin'ny vanim-potoana iainany. Ohatra, ny holatra sac dia mamoaka firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny spores ara-nofo antsoina hoe ascospores. Etsy ankilany, ny holatra kambana dia miteraka firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny spore asexual antsoina hoe conidia. Ascospores sy conidia dia karazana spore roa hita amin'ny tsingerin'ny fiainana holatra.
2. Inona ireo ascospores
3. Inona ireo Conidia
4. Fitoviana - Ascospores sy Conidia
5. Ascospores vs Conidia amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Ascospores vs Conidia
Inona ireo ascospores?
Ascospores dia spore ara-nofo novokarina tao anaty rafitra antsoina hoe ascii mandritra ny fiterahana. Ity karazana spore ity dia tena miavaka amin'ny holatra voasokajy ho ascomycetes. Ascus dia mamokatra ascospore amin'ny toe-javatra mety indrindra. Amin'ny ankapobeny, ny ascus tokana dia misy ascospores valo. Ireto spores valo ireto dia novokarina tamin'ny fizarana meiosis narahin'ny fizarana mitotic. Avy eo dia mamoaka ny ascospores ny ascus tokana. Blumeria graminis dia mamorona ascospore ao anaty toetr'andro mando. Ireo spores ireo dia mampiseho lamina fampandrosoana miovaova, tsy toy ny conidia, aorian'ny fipetrahana amin'ny sehatra mety na substrate.
Sary 01: Ascospores
Ny holatra Saccharomyces dia miteraka ascospores rehefa maniry ao amin'ny V-8, agareta ascospore acetate, media Gorodkowa. Globose ireo ascospore ireo. Ny ascus tsirairay an'ny holatra Saccharomyces dia misy ascospore iray ka hatramin'ny efatra. Matetika ny asci dia tsy vaky rehefa matotra. Ny ascospores ny saccharomyces dia azo tasy amin'ny kinyoun sy ascospore stains. Ankoatr'izay, rehefa voaloton'ny pentina Gram, ascospores of Saccharomyces dia miseho gram-negatif ary ny sela vegetative dia toa gram-positive.
Inona ireo Conidia?
Conidia dia spore asexual novokarina tao anaty rafitra antsoina hoe conidiophores amin'ny holatra conidial mandritra ny fiterahana. Ny Conidium indraindray dia antsoina hoe chlamydospore tsy manambady. Izy io dia spore holatra tsy misy motika. Conidia dia antsoina koa hoe mitopores. Izany dia vokatry ny zava-misy fa ny conidia dia vokarina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny sela antsoina hoe mitosis. Conidia dia afaka mivoatra ho lasa zavamiaina vaovao raha tiana ny fepetra. Ny fiterahana tsy misy fianahana ao amin'ny ascomycetes dia misy ny fanaovana conidia amin'ny alàlan'ny tsiranoka miavaka fantatra amin'ny hoe conidiophore.
Sary 02: Conidia Formation
Ny morphology of conidiophore dia matetika miavaka amin'ny karazany. Ankoatr'izay, misy karazany roa ny conidia vita amin'ny holatra: macroconidia sy macroconidia. Ny Macroconidia dia conidia somary lehibe sy sarotra, raha microconidia kosa dia kely sy tsotra voajanahary.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Ascospores sy Conidia?
Ascospores sy conidia dia karazana spore roa hita amin'ny tsingerin'ny fiainana holatra.
Ireo karazana spore ireo dia novokarin'ny rafitra manokana.
Afaka mitsimoka izy ireo.
Ireo karazana spore ireo dia mety mamorona hyphae fungal.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy Conidia?
Ny ascospores dia spore ara-pananahana novokarina nandritra ny fiterahana, ary ny conidia kosa dia spore asexual novoka nandritra ny fiterahana. Ka io no mahasamihafa ny ascospores sy ny conidia. Ny ascospores dia novokarina tao anatin'ny ascii, raha ny conidia kosa dia novokarina tao anatin'ny conidiophores. Ankoatr'izay, ny ascospore dia miteraka fizarazarana meiosis, fa ny conidia kosa dia miteraka fizarazarana mitotic. Noho izany, fahasamihafana lehibe iray hafa eo amin'ny ascospores sy ny conidia.
Ity infographic manaraka ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy ny conidia amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Ascospores vs Conidia
Ascospores sy conidia dia karazana spore roa hita amin'ny tsingerin'ny fiainana holatra. Ny ascospores dia spore ara-nofo novokarin'ny fiterahana ara-nofo amin'ny rafitra antsoina hoe Holland amin'ny holatra ascomycetes, raha ny conidia kosa dia spore asexual novokarin'ny reproduction asexual amin'ny rafitra antsoina hoe conidiophores amin'ny holatra conidial. Noho izany, mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny ascospores sy ny conidia.
1. “ Ascospore .” Topimaso iray | Lohahevitra momba ny siansa.
2. " Conidium ." Topimaso iray | Lohahevitra momba ny siansa.
1. " Asci with ascospores " Nosoratan'i George Shepherd (CC BY-NC-SA 2.0) avy amin'i Flickr
2. " Conidia Formation Image " Nosoratan'i Zeeshan 93 - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Apothecium sy Cleistothecia Fahasamihafana eo amin'i Agaricus sy Polyporus Fahasamihafana eo amin'ny mikiloma ambaratonga voalohany sy faharoa Fahasamihafana eo amin'ny Saccharomyces cerevisiae sy Schizosaccharomyces pombe Fahasamihafana eo amin'ny holatra Biotrophic sy Necrotrophic
Fahasamihafana eo amin'ny aretin'ny osteoarthritis sy ny artritis reumatiod
Fahasamihafana eo amin'ny Duchenne sy Becker Muscle Dystrophy
Fahasamihafana eo amin'ny Silica sy Silicon Dioxide
Fahasamihafana eo amin'i Kerala sy Ladakh
Fahasamihafana eo amin'ny toekarena sy toekarena